Bariis shiilan oo sedex macmacaan leh, cunno shiinees ah | Cunnooyinka jikada
Bariis shiilan oo sedex farxad leh, fudud oo caafimaad leh
Maria vazquez | | Cunnooyinka Shiinaha, Cunnooyinka caafimaadka leh
Hubso marar badan dhadhaminta bariis seddex farxad leh Makhaayada Shiinaha waxaad isweydiisay waxa ay ka kooban yihiin iyo sida aad ugu diyaarin karto guriga. Cunto karinta waxaan ku cadeynaynaa dhamaan shakigaaga maanta talaabo talaabo fudud ah oo qof walba ku dhiiri galin doonta inuu guriga ku kariyo.
Cuntadani fudud ee caafimaadka leh ee asalka Shiinaha ayaa lagu sameeyay maaddooyin aan dhammaanteen ka heli karno. Furaha ayaa ah in la doorto bariis hadhuudh dheer oo wanaagsan ah oo si fiican loo shiil ka hor inta aan loogu adeegin "macmacaanka" iyo taabashada soy. Waad u adeegi kartaa hal saxan, oo aad weheliso bowdyaha digaagga la kariyey ee macaan ama buuxinta fajitas ama canjeelada.
Qolka jikada: Shiinaha
Nooca cuntada: Bariis
180 g. bariis hadhuudh dheer
50 g. digir
150 g. ee cowska
2 xaleef qaro weyn oo ham la kariyey ah
2 qaado oo ah maraqa soy
saddex farxad oo bariis la shiilay Saddex farxad oo bariis la shiilay, oo fudud oo caafimaad leh
Waxaan ku bilaabaynaa karinta dabacasaha iyo digirta. Waayo, digsi biyo ah ayaan u dhignay si aan u kululaanno oo markay karkartana ku darso dabacasaha la xoqay iyo milix yar. Waxyar kahor inta dabacasaha uusan jilicsaneyn, ku dar digir kuna kari 4 daqiiqo oo dheeri ah. Markay karootada iyo digirtu jilicsan yihiin, ka qaad dabka, ka daadi, u oggolow inay diirimaad iyo jarjar karootada xabadaha.
Isla mar ahaantaana waxaan diyaarinaa omelette macaan. Waxaan ukunta ku garaacnay qanjaruuf milix ah iyo shaaha oo sonkor ah inta aan kuleylineyno digsi shaaha saliida ah. Marka saliidu kulushahay, ku shub ukunta una diyaari omelette macaan oo aad u fiican, sida crepe. Marka aan diyaarsano, waxaan ka saareynaa kuleylka, waxaan u jarjarnaa xargo iyo keyd.
Kadib bariiska waan karnaa biyo badan, iyadoo la raacayo tilmaamaha soo saaraha. Waxaan isku walaaqnaa waqti ka waqti markii ay dhaweydna waan ka baxnaa dabka, waxaan ku maydhannaa tuubada biyaha qabow ka dibna ka daadi.
Inta bariisku karinayo, waxaan ka faa'iideysaneynaa fursad aan wax ku goyno strips of ham la kariyey in aan kaydsano
Digsiga weyn ee shiil, kuleyli 3-4 qaado oo saliid saytuun ah iyo waxaan ku xaaqnaa cowska muddo 3 daqiiqo ah. Markay cowsku yeeshaan midab wanaagsan, ku dar bariiska si fiican u biyo baxay iyo labada qaado ee soy. Si fiican ayaan u walaaqnaa oo u kari karnaa daqiiqad.
Ugu dambeyntii, waxaan ku darnaa walxaha oo dhan (omelette, ham la kariyey, digir iyo karooto), walaaq iyo xilliga la adeegsanaayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Cunnooyinka Aduunka » Cunnooyinka Shiinaha » Bariis shiilan oo sedex farxad leh, fudud oo caafimaad leh
Baradhada baradhada leh khudradda khudradda
Genoese pesto, Suugada Baasto Talyaani ee dhaqanka